Balotelli oo Goolkii Ugu Horeeyey Horyaalka Intii Uu Liverpool La Joogay Guul Ugu Horseeday
HomeWararka MaantaBalotelli oo Goolkii Ugu Horeeyey Horyaalka Intii Uu Liverpool La Joogay Guul Ugu Horseeday
Super Mario oo Abaartii gool la’aaneed kaga baxay mid hiil u noqday Liver – Adhaxdana ka Jabiyey Tottenham.
Mar kaliya afka uma kala furin xataa ilko cadayn yar ma muujin si uu u dabaal deggo Mario Balotelli. In kastoo tababare Brendan Rodgers isagu uu afka isku dari waayay ama bishimaha isu keeni waayay farxad darteed.
Saddex iyo toban ciyaarood iyo todoba bilood oo uu ka dhex muuqday horyaalka Barclays Premier League isagoo ku lebisan funaanada kooxda Liverpool sidii hore xagaagani uguma dhamaanayo, Balotelli ugu dambeyn wuxuu ugu deeqay Gool kaas oo noqday mid kooxdiisa ka samato bixiyey xaalad ay u baahnaayeen inay badbaadaan.
Siday runtu ahayd, mid sidaas loo filayay ma ahayn, kubaddii uu dhulka soo raaciyey Adam Lallana laakiin inta la duwey shabaqa xagiisa sare cuskatay wakhti baahida gool maraysay heerkii ugu sareeyey, siduu doonose haku dhashee, wuxuu ahaa mid wax kasta ka qiimo badan.
Habeen markii ay ogaadeen inay garaaci karaan Tottenham, Liverpool u muuqatay kuwo ku fikiraya inaanay taasi wax dhacaya ahayn ama ay tahay sacab timo yeesha. Laba jeer ay hogaanka qabteen – labadaas goorna fursadu soo martay oo ay kala dhaliyeen Markovic iyo Steven Gerrard – iyo labadii goorba laga daba keenay oo lala sinmay, Harry Kane iyo Mousa Dembele goolasha u soo rideen Tottenham.
Xaqiiqdiina, bareejuhu ahaa cadaalad. Tottenham walow ay si debecsan ku bilowday hadana gadaal iska soo xoojisay.
Rodgers iyo Liverpool, siday doonto ha u dhacdee, waxay uga fadhiyeen isbedel Balotelli imikana waxaynu odhan karna wey ka heleen . Wakhti xaadirkan – u tartamidii kaalinta afraad ee Champions League booskaasi waa furan yahay cidii helli lahaydba – iyaga ayuunbaanay ku xidhan tahay siday ugu tuntuunsan lahaayeen.
Tottenham vs Crystal Palace (1-0) – All Goals & Highlights
BATE Borisov 3-2 Roma: Mucjisado Ku Habsatay Kooxda Boqorrada Talyaaniga
Waa Sidee Xaaladda Bale, Dhaawacii Sporting CP Kaddib
15/09/2016 Abdiwahab Ahmed